Ukugqitywa komphezulu - iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Kukho ukugqitywa okungaphezulu kwama-20 kunyango lomphezulu, iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa komphezulu zikwenza ukuba ukhethe kwaye kudityaniswe neendlela ezahlukeneyo zeminyango kunye neendawo. "Abathengi banoluhlu olukhulu lokukhetha kwaye oku kunokuba nefuthe kwindlela amashishini atsala kwaye akhule ngayo isiseko sabathengi, ukwakha ixabiso eliphezulu kunye nabathengi abathembekileyo kwaye ichaphazele indlela abantu abenza ngayo izigqibo ngokuthenga." Siphila kwixesha lokukhetha okuninzi.
Ukongeza, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabaqulunqi kunye nabenzi beminyango, izibambo zeminyango yeYALIS, imizimba yokutshixa, izivalo zomnyango, iihenjisi zomnyango zinokwenziwa nakwisiphelo esinye, esenza ukuba izixhobo zomnyango zifane ngakumbi kwaye zonyuse ubuhle.
Ixesha lokuvavanywa kwetyuwa lokutshiza ityuwa lijikeleze iiyure ezingama-96. Abanye abathengi bahlala kwimimandla eselunxwemeni, imozulu efumileyo ifuna ibango eliphezulu lokumelana neoksijini. Sinokwenza kwakhona ixesha lokuvavanywa kwetyuwa ngaphezulu kweeyure ezingama-200.